တူးမြောင်းစစ်ဆေးရေးလမ်းများ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ‌ခေါ်ယူခြင်း | Myanmar Tender Portal
တူးမြောင်းစစ်ဆေးရေးလမ်းများ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ‌ခေါ်ယူခြင်း
Tender ID: 6051
တင်ဒါကာလ: February 20, 2020 - March 30, 2020
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း၀န်ကြီးဌာ၊ ဆည်မြောင်းနှင့်ရေအသုံးချ စီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန၊ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
၁။ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း၀န်ကြီးဌာန၊ ဆည်မြောင်းနှင့်ရေအသုံးချစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနမှ JICA ODA Loan ချေးငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး သဖန်းဆိပ်ဆည်ရေသောက်ဧရိယာအတွင်းရှိ Agriculture Income Improvement Project (Loan Agreement No MY-P25) အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ တူးမြောင်းစစ်ဆေးရေးလမ်းများ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်။
Sr.No. IFB No. Location Types of Road Road Lengths Remarks
1 IWUMD-IFB-001-A1- OMC(2019-2020) Old Mu Canal Asphalt Section 21.97 km 1 lot
2 IWUMD-IFB-002-A2- MBC(2019-2020) Ma Ya Kan Branch Canal/Tail DY Canal Asphalt Section 18.62 km 1 lot
3 IWUMD-IFB-003-M1- SMC(2019-2020) Shwebo Main Canal/Mok So Gyon Branch Canal Macadam Section 50.16 km 1 lot
4 IWUMD-IFB-004-M2- YMC(2019-2020) Ye-UMain Canal/ Ma Ya Kan Branch Canal Macadam Section 41.05 km 1 lot
5 IWUMD-IFB-005-M3- OMC(2019-2020) Old Mu Canal Macadam Section 5.23 km 1 lot
၂။ အထက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းများအား တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းကို JICA ၏ Procurement Guidelines ၏ Standard Bidding Document (Works)ပါ စံညွှန်း၊ စည်းမျဥ်း၊ စည်းကမ်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၃။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံ စတင်ရောင်းချမည့်ရက်/အချိန် - ၂၀.၂.၂၀၂၀ ရက်မှစ၍ (ရုံးချိန်အတွင်း)
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ နောက်ဆုံးတင်သွင်းရမည့်ရက်/အချိန် - ၃၀.၃.၂၀၂၀ ရက် (၁၃:၃၀)နာရီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါဖွင့်ဖောက်စစ်ဆေးမည့်ရက်/ အချိန် - ၃၀.၃.၂၀၂၀ ရက် (၁၄:၀၀)နာရီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ၀ယ်ယူ/တင်သွင်းရမည့်နေရာ - ဖြည့်တင်းရေးဌာနခွဲ (၁)၊ ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအသုံးချ စီမံခန့်ခွဲရေးဉီးစီးဌာန (ရုံးချုပ်)၊ ရုံးအမှတ် (၄၃)၊ နေပြည်တော်
၄။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံ (Bidding Document) များကို Lot တခုခြင်းစီအလိုက် အထက်ဖော်ပြပါလိပ်စာ၌ (ရုံးချိန်အတွင်း) လာရောက်၀ယ်ယူနိုင်ပြီး သတ်မှတ်ရက်နှင့်အချိန်ထက် ကျော်လွန်တင်သွင်းသည့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို လက်ခံစဥ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။
၅။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး (ပြည်ပ)၊ ဖြည့်တင်းရေးဌာနခွဲ (၁)၊ ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအသုံးချစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်)၊ ဖုန်း - ၀၆၇-၃၄၁၀၃၁၆ နှင့် Email No.aiip.irr25@gmail.com သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။